Ama-pads e-China Auto Parts Brake we-VOLVO 822-1120-0 Ukukhiqiza nefektri | Yihaojia
Ukuphakama: 75.2 mm
Ububanzi: 181.4 mm
Ubukhulu: 17.3 mm
Ububanzi 1: 180.1 mm
Ukuphakama 1: 74.9 mm
Amabhuleki amabhuleki afaka ipuleti lensimbi elenza izinto ezinobunzima ebusweni lazo elicindezela ubuso be-rotor surface ukumisa imoto yakho. Bacindezelwa yi-brake caliper lapho ithola ingcindezi ye-hydraulic evela ku-master cylinder. Ama-brake pads ngokwemvelo aguga ngokuhamba kwesikhathi, kepha kubalulekile ukunaka amaphethini wabo wokugqoka. Uma ama-brake pads ekhala noma egaya, kungenzeka ukuthi agugile epuletini elixhasayo, elingadala umonakalo ku-Rotor. Ama-brake pads agqoka ngokungalingani angakhombisa inkinga nge-brake caliper yakho noma izikhonkwane zokuqondisa. Lapho ama-brake pads wakho efuna ukushintshwa, ungaqaphela ukuthi imoto yakho iyaqhaqhazela noma ishaye uma ubopha. Lokhu kungabangelwa yi-rotor esontekile, ngakho-ke kungcono ukukufaka esikhundleni sobabili lapho uqeda umsebenzi wamabhuleki. Uma usukulungele ukulungisa amabhuleki akho, bheka izingxenye ze-O'Reilly Auto. Siphatha ama-brake pads, ama-brake rotors, ama-brake calipers, nokuningi ukuze kulungiswe ngokuphelele.
Qaphela ukuthi ama-pads e-ceramic awavimbeli ama-rotor ekugoqeni. Uma umshayeli esebenzisa kabi noma eshisa amabhuleki emoto, ama-rotor azoguquka. Amanye ama-brake pads athuthukise izimfanelo zokuchitha ukushisa, ezingasiza ukuvimbela ukushuba, kepha kuphela ngezinga elithile ngoba ayikho indlela yokuthi ama-rotors akhululwe ngokuphelele ekubeni asontekile. Ngakho-ke, phatha amabhuleki emoto ngokunakekela ngokugwema ukubopha amabhuleki kanzima lapho kunokwenzeka.
Noma ngabe unemoto enamapayipi wamabhuleki e-ceramic amasha noma amasha, hamba kalula kumaphakethe ekuqaleni. Ngamaphakethe amabhuleki e-ceramic, kuwumqondo omuhle ukugwema ukuma ngokushesha noma ukubhuleka kakhulu okungenani amamayela ambalwa okuqala ayi-100.
Umkhiqizi ngamunye wephedi wamabhuleki uzoba nezincomo ezihlukile zokuthi kufanele ufake nini ama-brake pads wemoto yakho. Kodwa-ke, izitolo eziningi zinxusa abanikazi bezimoto ukuthi bashintshe amapayipi amabhuleki lapho kusala amaphesenti angama-20 kuphela obukhulu bokuqala noma noma yikuphi kuze kube ngamamayela angama-70,000.
IVOLVO XC90 2016-
I-VOLVO XC90 Induduzo 2016-
I-VOLVO S90 2017-
I-VOLVO S90 Induduzo 2017-
I-APEC BRAKE BRAK PAD2130 PAD2130
ATE 13.0460-7328.2 13046073282
IBRECK 22317 00 553 00 223170055300
I-CIFAM 822-1120-0 82211200
UDELPHI LP3256 LP3256
I-FMSI 9094-D1865 9094D1865
I-FMSI D1865 D1865
I-FMSI D1865-9094 D18659094
UGALFER B1.G120-1362.2 B1G12013622
UKUGCINA 6121536 6121536
U-HELLA 8DB 355 024-801 8DB355024801
U-HELLA PAGID 8DB 355 024-801 8DB355024801
I-ICER 182272 182272
I-LPR 05P2004 05P2004
IMOTAQUIP LVXL1894 LVXL1894
I-NIBK PN0696 PN0696
I-PAGID T2515 T2515
UKUVIKELA UKUSEBENZA UKUSEBENZA
R AMA-BRAKE RB2272 RB2272
REMSA 1696.00 169600
INDLELA 21696.00 2169600
I-SBS 1501224831 1501224831
UMBHALO 2231701 2231701
UKUTHEMBELA 1120.0 11200
UKUVUKA P17963.00 P1796300
UZIMMERMANN 22317.185.1 223171851
fri.tech. 1120.0 11200
Langaphambilini Ama-Auto Parts Brake Pads we-JAGUAR 9090-D1861
Olandelayo: Izingxenye ze-D2025 Brake Pads Auto zeBUICK Car Spare Parts (23145351)
I-Auto Brake Pad
Ama-pads we-Auto Brake
Imoto Auto Brake Pad
Amapayipi Amabhuleki Emoto
Imoto Brake Pad
Good Quality Auto Car Ingxenye Ukwakhiwa okusha Cera ...
D888 SEMI-METAL Formula Brake Pads Auto Parts f ...
D823 SEMI-METAL Formula Brake Pads Auto Parts f ...